Wararka Maanta: Jimco, May 27, 2017-Fariinta madaxweyne Famaaji iyo RW Trudeau ee bisha barakeysan ee Ramadaan
Wararka Maanta- Jimco, May 27, 2017
Fariinta madaxweyne Famaaji iyo RW Trudeau ee bisha barakeysan ee Ramadaan
Kooxda Arsenal oo ku guuleysatay Koobka faca-weyne ee FA Cup
5/27/2017 4:04 PM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) - Kooxda kubada cagta ee Arsenal oo marka la eego kala horeynta horyaalka Ingariiska ku jirta kaalinta Shanaad ayaa caawa ku guuleysatay Koobka FA CUPka.
Ciidanka dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaanka Goofgaduud
5/27/2017 9:26 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Ciidanka dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Midowga Africa ee AMISOM, ayaa dib maanta ula wareegay degaanka Goof-Gaduud oo 30-KM u jira Magaalladda Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, sida warbaahinta dowladda ay sheegtay.
5/27/2017 8:09 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) - Dowladda Turkiga ayaa shaacisay in 300 oo Askari iyo tababarayaal u soo diri doonto Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho bisha August oo sanadkan.
Wafdi uu horkacayo wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa gaaray Doolow
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Wafdi uu hogaaminayo wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Michael Keating ayaa gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayadoo halaasi ay kusoo dhaweeyeen masuuliiyii ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland.
Magaalada Kismaayo oo laga daahfuray tartanka qur'aanka Kariimka ee Bisha Ramadaan
5/27/2017 7:40 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Tartankan oo ah mid la qabto sanad walba marka la gaaro bisha Barakeeysan ee Ramadaan ayaa waxaa ku loolama arday kala mataleeysa dugsiyada barashada qur'aanka kariimka ee magaalada Kismaayo.
Maxkamada ciidamada Puntland oo xukun dil ah ku riday shan dhalinyaro ah
5/27/2017 6:45 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) - Maxkamada darrajada koowaad ee ciidamada Puntland ayaa xukun dil ah ku riday shan dhalinyarro ah oo sidda la sheegay dhawaan lagu qabtay iyaga oo la socday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa.
Burcad-Baddeeda Soomaalidda oo afduubtay Doon iyo shaqaallihii saarnaa
5/27/2017 6:20 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Doon kalluumeysi iyo 21 kamid ah shaqaallihii saarnaa ayaa waxaa afduubtay maanta kooxo burcad-Baddeed ah, sida warbaahinta koonfurta Kuuriya ay sheegeen.
Maleeshiyaad labo Wiil oo walaal ah ku dilay gobolka Mudug
5/27/2017 5:55 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) - Maleeshiyaad hubeysan ayaa deegaan lagu magacaabo Caliwaal oo ka tirsan deegaanka Balibusle ee bariga gobolka Mudug waxaaay ku dishay laba wiil oo walaalo ah, waxaana dadka deegaanka ay dilkan ku sheegeen in uu salka ku hayo aano qabiil.
Soomaaliland oo sheegtay in Imaaraadka weeraro u adeegsan karaan saldhiga Berbera
5/27/2017 5:15 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) – Dowladda Imaaraadka Carabta oo dhawaan la wareegtay dekedda Berbera oo ay isticmaalayan saldhig militari, iyaga oo isku diyaarinaya weeraradii ugu horeeyay oo ay halkaa ka qaadaan.
Soomaaliya oo yeelaneysa manhaj mideysan
5/27/2017 4:24 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday markii ugu horeysay in sameynayso manhaj cusub ka soo loogu talagalay in lagu hormariyo waxbarashada carruurta Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed
5/27/2017 3:30 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) – Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay caawiyaan dadka dhibaateysan inta lagu guda jiro bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Dowladda Kenya oo ka foojigan weerarada Al-shabaab
5/27/2017 2:55 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) – Iyadoo maalmihii ugu danbeeyay weeraro loo adeegsanayay qaraxyo ay ka dhaceen deegaanno ka tirsan gobolka Waqooyi Bari, ayeey sheegtay dowladda Kenya in ay ka foojigan tahay weeraro mar kale uga yimaada dhinaca Al-shabaab.
5/27/2017 2:24 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Garoonka diyaaradaha ee magaalladda Muqdishu, waxaa shalay soo caga dhigatay diyaarad sidday inkabada 50 qof oo Soomaali ah oo laga soo tarxiilay dalka Maraykanka, sida ay sheegeen saraakiisha garoonka Aadan Adde.
Xukuumadda Soomaaliya oo dhintay saacadaha ay shaqeeyaan shaqaallaha rayidka
5/27/2017 2:01 AM EST
Sabti, May, 27, 2017 (HOL) –Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaallaha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Saalax Jaamac, ayaa sheegay in ay dhimeen waqtiyadii Shaqadda ee Shaqaallaha Rayidka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
South Korea says contact resumed with vessel off Somalia, crew safe -Reuters
5/27/2017 8:10 AM EST
Turkana on alert after cholera outbreak in camp -Daily Nation
5/27/2017 8:04 AM EST
In Somalia, Islamist rebels are blocking starving people from getting food -Washingtonpost
5/27/2017 6:01 AM EST
South Korea's anti-piracy unit searches for Mongolian ship off Somalia -Reuters
5/27/2017 5:44 AM EST
UN rights expert urges support for Somalia -UNHCR
5/27/2017 2:18 AM EST
Imams in U.S. take on the anti-vaccine movement during Ramadan -Washingtonpost
5/27/2017 1:57 AM EST
Somaliland Says UAE Can Launch Attacks From New Base -VOA
5/27/2017 1:47 AM EST
Suspects In Cab Driver’s Beating Death To Stand Trial -CBS
5/27/2017 1:34 AM EST
PITTSBURGH (KDKA) — Four men, charged in the beating death of a Somali cab driver, will stand trial.
Their American Dream Deferred, Deported Somalis Arrive Home -VOA
5/27/2017 1:23 AM EST